Akwụsịrị m Akaụntụ M Basecamp Taa | Martech Zone
N'oge gara aga, abụ m onye na-akwado ya 37 Mgbama. Ekwenyere m na ha dị n'ihu ụbọchị ha na nhazi ọrụ na njirimara dị mfe. Akwụkwọ ha, Inweta Ezigbo, ka nwere mmetụta n’otú m si zụlite, mepụta, ma wuo ngwaahịa chọrọ. M tinye n'ọrụ a Basecamp akaụntụ ma nyochaa ọtụtụ ọrụ m na ndị ahịa m ebe ahụ kemgbe oge ọkọchị gara aga.
Mgbe ị na-agụ ya 37 Mgbama blog n'afọ gara aga, achọpụtara m na ụda nke blog agbanweela n'ụzọ dị egwu, na-aghọkwu ndị ikpe na ndị nwere oke oke karịa ịchọ ịmata ihe na nyocha. Ileba anya, nke a. Ihe ngosi 37 na-ekpochapụ ngwa ntanetị / offline na ntanetị na njikọta bụ ihe anyị niile ga-enwe, ebe niile. Nke a bụ ihe m kwuru na m dere na blog:
Echiche nke ị na-ele na nke a dị warara nke na enwere m ihe ijuanya n'ezie dịka onye na-akwado akara 37. Na-agwakọta ọrụ ịntanetị na offline na Njikọ Internetntanetị.
Nke a abụghị ajụjụ nke ijikọ, ọ bụ ajụjụ gbasara njikwa akụ. Ọ bụrụ na m nwere ike ịnweta ngwa nke na-eji akụ nke laptọọpụ nke ọma dị ka nke ihe nkesa, yana ịkwado ojiji nke bandwidth n'etiti ha abụọ, ọ nwere ike ịmepụta ahụmịhe onye ọrụ dị egwu maka ndị niile metụtara.
Etinyekwara m ihe edeturu na iji bọmbụ f-bọmbụ enweghị isi. Na ntuli aka m mere na blọọgụ m, ihe dị ka 40% nke nzaghachi ahụ kwuru na ha achọghị iji cussing na webụ. N'ọtụtụ posts, Ahụla m ya na ejiji ọchị ... mana na akara 37 nke blọọgụ ọ bụ ọgụ na mgba ational m, onye na-agụ ya nwere ike ikwenyeghị ha. Ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù. Ekwela ka m mehie, m na-atụ (oke). Mana anaghị m eme ya na blọọgụ m ebe m na-anwa ijikọ ndị na - agụ akwụkwọ m karịa ịhapụ ha.
Kpọ iyi abụghị ihe mere m ji kagbuo nke m Basecamp Akaụntụ taa. N'ime ndị ọrụ iri na abụọ m nwere, ọ bụ naanị m bụ onye jiri Basecamp mee ihe. Echere m na otu enyi m ọzọ gbakwunyere otu ihe ị ga-eme, na-abụghị na m bụ naanị onye ọrụ maka afọ gara aga (na m akwụ ụgwọ maka akaụntụ ahụ). IMHO, ezigbo nnwale nke ngwa ojiji bụ ma ndị mmadụ n’eji ya. Ndị ahịa m na ndị ọrụ m emeghị. N'ezie, echere m na ha zeere iji ya n'ihi na ọ bụghị enyi na enyi ahụ.
Nke ahụ abụghịkwa ihe mere m ji kagbuo, ọ bụ ezie. Couplebọchị ole na ole gara aga, blọọgụ ha webatara ọhụụ ọzọ nke amaghị ihe: Ndị mmadụ anaghị agagharị scroll email. Ikekwe ha gaara agwa ndị ahịa 6,000 anyị na-ejere ozi na-enweta ntụgharị dị egwu na pịa-site na ọnụego na ozi ịntanetị nke ọma nke chọrọ ịpịgharị. Ozizi 'N'elu ogige' ka ka dị - ihe ọmụma nke ndị na - agụ ya na-ahụ mgbe izizi imepe email bụ ihe na - etinye ha. Nke a apụtaghị na ha anaghị agagharị, agbanyeghị! Yabụ - na enweghị data ọbụla iji kwado nkwupụta ha na-akwa ọchị, ndị na-agụ Signals vs. Noise blog ga-ekwenye ha ugbu a ma dee ozi ịntanetị ndị na-abụghị ozi, bara uru, nke ọma, wdg… niile n'ihi na ụfọdụ blog gwara ha na nke a bụ eziokwu. azịza.
Ihe mere m ji kagbuo akaụntụ Basecamp m bụ na enwekwaghị m ntụkwasị obi na akara ngosi 37. Amaghị m ma ọ bụrụ mpako site na uto na ọganiihu nke ụlọ ọrụ ha, mana nchapụta ha agbapụla. M ka bụ onye na-akwado ụfọdụ n'ime ọrụ dị mfe nke ngwa ha… mana ngwa ahụ n'ozuzu ya adịghị ka ọ na-agbanwe odida obodo dịka ha mere n'oge gara aga. Lee ya mgbe e mesịrị, 37! Ọ bụ ihe ọ whileụ ka ọ dịgidere.
Eleezie m gbanwere iGTD, ngwa desktọọpụ.
Tags: Ihe ngosi 37Basecamp
Mu onwe m, nna m, were iwe site na 37Signal post. Ọ na-ewekwa mba na-emepe emepe ihe.
Ekwenyere m na ọ dịghị mkpa ka ị swearụọ iyi na blọọgụ, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkọwa isi gị na-enweghị iyi, mgbe ahụ ọ bụghị nke ahụ siri ike.
O yiri ka a ga-etinye ya ebe ahụ iji nweta mmeghachi omume, ebe m chọpụtara na ọ fọrọ nke nta ka ihe 200 kwuru na blọọgụ 37.
Stephen - kwetara. Banyere ị sweụ iyi, ọ bụ akụkụ nsọpụrụ ka m na-aghọtaghị. I nwere obere onyinye, ị ka nwere ike iju mmadụ anya, kwuo eziokwu ma kwupụta eziokwu, mana ka na-asọpụrụ. Aghọtaghị m na ị sweụ iyi nwere ike ịba uru na blọọgụ ụlọ ọrụ.
M na-agụkarị blog 37Signals, mana enwere m oke nkụda mmụọ na ya na ndị nọ n'azụ ya. Ndị maara ihe, enwere m obi ụtọ na ha lekwasịrị anya na ịdị mfe na ilekwasị anya na onye ọrụ. Ma - dị ka ihe ị kwuru - mmesi ike na blọọgụ ghọrọ nke iche na oke (“anyị ziri ezi, onye ọ bụla ọzọ dị nzuzu”), achọpụtara m na ọ na-ewetu onwe ya ala ma na-akpasu iwe.
IMHO, ndị na-esote 37Signals dabara na ihe yiri ihe niile-zuru oke taa - nkwenye na, nke ọma, n'ihi na ụlọ ọrụ anyị nwere ihe ịga nke ọma, mgbe ahụ, ụzọ anyị si eme ihe bụ ụzọ ziri ezi na onye ọ bụla nwere ike ịmeghachi ihe ịga nke ọma anyị site n'ịmụ usoro anyị.
Hogwash. E nwere ọtụtụ ndị pụtara ìhè na ndị na-enye ọmarịcha ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị egwu na-ere ọkụ n'ihi ajọ ihe ọjọọ ma ọ bụ usoro iheomume yana ndị na-eme ihe ọchị na ụlọ ọrụ na-asọ oyi bụ ndị meriri n'ihi oke obi ụtọ na oge dị mma. Naanị ọtụtụ ndị na-eche na ha nwere nkwekọrịta na ihe kpatara na ọ nweghị nke dị adị.
M na-ahọrọ karịa obi umeala obibia: Nke a bụ ihe anyị mere, ebe a bụ ihe ihe anyị ụlọ ọrụ mere… were ya ihe ị ga-. Ikekwe ọ ga-arụ ọrụ dị ukwuu maka gị, ikekwe ọ bụ ihe jọgburu onwe ya maka ụlọ ọrụ gị… ị kacha mara.
Isi ihe, Adam.
Echere m na otu n'ime ihe mmụta na nke a bụ na blọọgụ nwere ike ịbụ ngọzi ma ọ bụ ọbụbụ ọnụ nye ụlọ ọrụ gị. Ọ bụrụ na ị bụ jerk… mgbe ahụ blog gị nwere ike ikpughe nke ahụ. Ndị mmadụ anaghị enwe mmasị ịrụ ọrụ na jerks. Ofda nke blọọgụ ha emewo ka m gbanwee ụlọ ọrụ ha dum.
Ihe na-adọrọ mmasị bụ ịgụ ọnwa ikpeazụ nke ndenye ma jiri ya tụnyere akwụkwọ ahụ, Inweta Ezigbo. Da olu dị iche na mmalite ịdị umeala n'obi ha.
Obi dị m ụtọ ịhụ na abughi m naanị onye hụrụ na ndị ahịa ha anaghị eji Basecamp eme ihe, mana ha agaghị abanye na ya.
Ọ dịka ị gụrụ uche m, wee dee ya n'ụzọ dị nkenke karịa ka m nwere ike ịnwe.
Mụ onwe m, edeghị aha site na 37s ọnwa ole na ole gara aga n'ihi 'anyị ziri ezi, onye ọ bụla ọzọ ezighi ezi - lee anyị anya, ọ bụ na anyị abụghị ezigbo egwu. Ọ dị mwute, n'ezie. O doro anya na ha bụ ndị nwere nkà.
Mara kwa na ha ekwuola Mark Hurst / Ezigbo Ahụmịhe n’oge gara aga, ekwere m na ekwuola okwu na Nzukọ Gel ya. Akwụkwọ akụkọ Ezigbo Ahụmahụ bụ otu n'ime ozi ịntanetị kachasị ogologo ana m anata… na m na-agagharị na okwu niile ọ bụla.
Pointsfọdụ ihe: Ekwenyere m na mgbanwe nke ụda, na m na-ewe iwe na ya. Anaghị m agụ SvN kwa ụbọchị iji ịnụ ọkụ n'obi m na-emebu. Agbanyeghị, ọ ga-amasị m ịnye ụfọdụ akara mgbochi:
1. don't adịghị ada dị ka lekwasịrị Basecamp ahịa, karịsịa ma ọ bụrụ na i nwere ike dochie ya arụmọrụ na a nguzo-naanị desktọọpụ ngwa. Ma ọ bụrụ na ndị ahịa gị abanyeghị, ọ ga-abụ na ha ga-ejupụta PM ha ọzọ.
2. Re: na-akpọ iyi, ọ bụ blog ha. N’ebe m nọ, ọ ga-akara m mma ma kwuo eziokwu n’ezoghị ọnụ karịa ihe nzuzu ọcha ị gụrụ ebe niile.
3. Echere na ha edochaghị anya, echere m na ha na-ezo aka na ntinye aha ndebanye aha / ntinye, ọ bụghị ozi email n'ozuzu ha. Cheta otu ebumnuche ha bụ ịba uru dị ka o kwere mee ma belata nkụda mmụọ onye ọrụ site na iwepu mkpa nkwado ebe ọ bụla ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ha na-eziga nke a, ọ ga-abụrịrị na ha ahụla ọtụtụ arịrịọ nkwado sitere n'aka ndị na-agụghị akwụkwọ ozi ezigara ha. Amaghị m ihe na-agba ha ume ịgha ụgha ebe a. Nzaghachi gị na-emetụ m dị ka * obere * na-agbachitere na site na POV nke email marketeer (mezie m ma ọ bụrụ na m ezighị ezi).
Ndewo SirZ! Isi ihe niile, ka m zaghachi:
1. Ikekwe. Naanị m gara na desktọọpụ desktọọpụ ruo mgbe m nwere ike ịhụ njikwa ọrụ / njikwa njikwa ngwaahịa ọzọ. Ekwenyere m na a ga-enwerịrị ngwa dị ukwuu iji soro ndị ahịa kerịta - Ekwenyesiri m ike na Basecamp ọ bụghị ikpe ikpe na nzaghachi nke ndị ahịa m. Email ka bụ ụzọ bụ isi esi ekwupụta ihe a na-eme, ebumnuche ọrụ, akwụkwọ, wdg.
2. Abụ m ihe niile maka nghọta, mana ị nwere ike nweta isi okwu gị n’agụghị iyi. Isi okwu m na nke a bụ na ọ baghị uru na ga- kewapụ ụfọdụ ndị nwere ike ịhụ ngwaahịa gị na ụlọ ọrụ gị n'anya. Ọ bụ site n'ikike nke nkwanye ùgwù.
3. You're zuru oke, nzaghachi m na-agbachitere dị ka ahịa email. ITwa IT na-ekewa ozi email na otu abụọ: arụmọrụ na ahịa. Y'oburu na isi okwu ha bu na aghaghi beghapu ozi-e arụmọrụ, yabụ na ha kwesiri inye ufodu ihe ha chere. Nanị ikwupụta ya adịghị eme ka ọ bụrụ eziokwu.
Dabere na ndị ahịa anyị, eziokwu ahụ gosipụtara dị iche. Enweghị m data siri ike iji kwado mmegide m, mana ahụmịhe m nwere bụ ihe megidere ya. Email arụmọrụ banyere otu esi edebanye aha bụ zuru okè ebe a ga - eji HTML mee ogologo oge na nseta ihuenyo, nkọwa, na usoro imepụta ndị ọzọ dị ukwuu. Enwere m ike ịrụ ụka na email na-arụ ọrụ bụ ebe ka mma maka ịpịgharị karịa email ahịa ebe ọ bụ na onye debanyere aha na-atụ anya ịnweta nkwukọrịta!
Ọ bụkwa ohere zuru oke maka ịda mba na ire ere. Got nwere onye ahịa kwere nkwa nke nwere ike inwe ekele maka ngwaahịa ma ọ bụ onyinye ọrụ ọzọ dabere na ọdịnaya nke ozi ị na-ezipụ.
Nnukwu ihe ntanetị ị nwere ike ịnabata onwe gị (ma ọ bụ jiri ọrụ ha nyere akwadoro) bụ Project Copper. O nwere ekpomeekpo atọ nke na-akwụ ụgwọ karịa dabere na mkpa gị. Achọpụtara m na n'ime 90% nke ikpe m ụdị nsụgharị ahụ na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Emere m ikpe ikpe Basecamp ma n'ezoghị ọnụ na ọ naghị ebi na nkwa na ụdị mkpuchi niile dugara m ikwere na ọ ga-eme. M ka na-enwe nsogbu na-enweta ha ịkwụsị ịgba ụgwọ kaadị kredit m kwa na ha anaghị enyere aka na njedebe ha.
Ọrụ ndị ahịa abụghị akụkụ nke 37Signals lexicon nke m na-achọta ụdị ihe nwute n'ihi na ha nọ n'ụdị nnukwu ebili mmiri dị ukwuu na nnukwu ihu ọma. N'ịgụ blog a na ndị ọzọ ọ dị ka ha amalitela imebi echiche ha n'ọma ahịa. dị nnọọ mwute.
Naanị mmelite. David Heinemeier Hansson ji amara wee kwụghachi ọnwa abụọ nke kaadị akwụmụgwọ m na-arụrịta ụka. Echere m na usoro ahụ siri ike karịa ka ọ dị.
Enwere m olileanya na ha ghọtara ihe ha na-anọchite anya anyị. 37Signals ghọrọ n'ezie otu n'ime akwụkwọ ụmụaka / ụlọ ọrụ maka ngagharị web2.0 na ọ ga-abụ ihe ihere ịhụ ka ihe oyiyi ahụ rụrụ arụ.
Ndị a bụ mkpụrụedemede ole na ole sitere na Cluetrain Manifesto nke yikarịrị ka ọ dị mkpa…
Lọ ọrụ ndị na-amataghị ahịa ha na-akpakọrịta ugbu a n'otu n'otu, na-enwe amamịghe n'ihi ya ma na-esonye na mkparịta ụka na-efu ohere kachasị mma ha.
21 Companlọ ọrụ dị iche iche kwesịrị ịgbasawanye ma jiri onwe ha kpọrọ ihe. Ha kwesiri inwe ihu ọchị.
89 Anyị nwere ezigbo ike ma anyị maara ya. Ọ bụrụ na ịhụghị ìhè ahụ, ụfọdụ uwe ndị ọzọ ga-abịarute nke na-elebara anya karị, na-atọ ụtọ, na-atọkwu ụtọ iji egwu.
95 Anyị na-eteta ma na-ejikọ ibe anyị. Anyị na-ele anya. Ma anyị anaghị echere.
Na site na Nordstroms…
Mee ndị ahịa ihe ziri ezi ma ọ bụrụ na ị ga-ahapụ gị
Sep 24, 2008 na 1:25 PM
He he… so, iyi na-eme ihe n'eziokwu na ị sweụ iyi adịghị akwụwa aka ọtọ?
Abụwo m nnukwu onye kwere ekwe nke 37Signals kemgbe akwụkwọ ha ma chee na isi okwu ha na SXSW afọ gara aga dị mma. Nke ahụ kwuru, echere m na ọ bụ naanị m bụ onye chọtara Basecamp karịa nke zuru oke. M ka na-eji ya kwa ụbọchị mana m na-amalite ịtụ ya ụjọ kama enwere m obi iru ala na agbajiri m agbụ nke ngwa ngwa desktọọpụ m. Dị ka ụda nke blọọgụ ha na-aga, enweghị m ike ịza ajụjụ ebe m bụ naanị onye na-agụkarị oge, mana ana m eche na onye ọ bụla na-akọcha na ọnọdụ "ọkachamara" na-agbasi mbọ ike igwu egwu ụmụaka.
O juru m anya ịhụ ka ha na-eji F-bọmbụ na post ha. Dị ka ị kwuru n'ụzọ ziri ezi, ọ bụ ihe enweghị isi, na n'ikpeazụ naanị ụmụaka. The “jụụ” ihe nke ịbụ mgbochi oruru malitere yi mkpa a ogologo oge gara aga. N'otu ihe efu na ọ bụ blọọgụ ha, dị ka SirZ gosipụtara, n'ụzọ ọ bụla, echeghị m na onye ọ bụla na-ekwu na ha enweghị ikike ịme ya, mana nke ahụ anaghị eme ka ọ dị akọ, ma ọ bụ mee Aghaghị m ịnakwere ya n'onwe m.
Akwụkwọ ha bụụrụ m egwuregwu. Nkwuwa okwu sitere n'aka ndị nwere obi ike iji nwee nkwuwa okwu. O doro anya na ọtụtụ ndị ọsụ ụzọ na ụlọ ọrụ niile anaghị eso isi, mana omume ịchụpụ bụ ihe nzuzu. Emela, ịdị mfe n'ihi na ị dị mfe B NOTGH a mgbe niile ezi echiche.
M na-ewakpo mgbe niile site na ọchịchọ ha maka Rails, ma ọ bụ enweghị ya maka okwu ahụ. Ihe ngosi 37 ekwuola n'ọtụtụ oge na ha achọghị ka Rails ka ọ bụrụ isi ma ọ bụ "nwee ihe ịga nke ọma", ndị fanboys na-eri ya. Chọpụta… na a isi larịị na pụrụ ịdị mma… ma ka na-pragmatic. Otu n'ime ihe ịma aka kasịnụ nke Ruby na ọkachasị Rails ndị mmepe na-eche ihu bụ ụkọ gburugburu iji dozie ngwa ngwa maka ha. Ruby enweghị ebe ọ bụla PHP, ma ọ bụ ọbụna Python nwere. Ọ bụ ezie na mmepe nwere ike ịbụ ihe ntụrụndụ, ana m eme ya karịsịa iji nweta ego. Enwere m obi ụtọ na m ga-eme ihe m hụrụ n'anya maka ndụ, mana m ka kwesịrị ịkwụ ụgwọ ahụ ma nye ụmụaka nri. Rịọ ndị mmadụ ka ha tinye okwukwe, mgbalị na akụ dị otu a n'ime ihe, wee gwa ha na ịchọghị ka ọ gaa nke ọma dịka o nwere ike… si otu a na-abawanye uru nke ojiji ya… dị ka hogwash.
37 Ihe mgbaàmà ogologo oge gara aga site na hubris. O juru m anya na ọ werela ndị mmadụ ogologo oge ịmalite ịmalite ịhụ ya. Ha dị ka igwe ahịa maka onwe ha.
Otu ihe ọzọ m chọrọ igosi SirZ. N'agbanyeghị ikike Karr dịka onye na-ere ahịa email, agaghị m eleghara echiche ya anya. Mara na nke ahụ na-enye ya ohere nghọta na ihe ọmụma nke ụlọ ọrụ na ihe dị irè karịa ndị ọzọ, gụnyere onwe gị, na ikekwe 37 Signals. Echiche naanị anaghị eme gị ego, nsonaazụ na - akpata ego money ma ọ bụrụ na usoro Mr Karr na - eweta nsonaazụ, kedụ onye ị ga - ebelata ha?
Ekwenyere m na ụda nke blọọgụ ha ịghọ 'mara ya niile' ma na-efunahụ agụụ ahụ iji nweta ya. M na-eche na na iwebata Highrise nke bụ kwa hyped, na n'elu-gosiri ugbu a na anyị ahụwo ya. M ka nwere akaụntụ Basecamp m, mana m na-elezi anya nke ọma.
Otu ihe kpasuru m iwe banyere 37signals bụ ndị ahịa 1,000,000 Basecamp na-ere ahịa. Ọ bụghị nnọọ eziokwu, ebe m nwere mmetụta dị ukwuu nke nke ahụ anaghị arụ ọrụ.
Enwere m ma ọ dịkarịa ala akaụntụ 4 dị iche iche Basecamp, ma jiri otu n’ime ha mee ihe n’ime ọnwa ole na ole gara aga. Dị ka gị Doug, ahụrụ m na ọrụ ọ bụla enwere ndị ọrụ aka ole na ole na-abanyebeghị, ma ọ bụ naanị abanye otu ugboro ma ọ bụ abụọ iji lelee ya.
Ebe ọ bụ na enweghị ngosi dị ndụ, ejiri m n'aka na ọtụtụ ndị debanyere aha na akaụntụ efu naanị iji lelee sọftụwia ahụ, ma mesịa ghara iji ya mee ihe n'ezie.
Nke ahụ bụ n'ezie na-akpali mgbe, na-echetara m nke akwụkwọ akụkọ subscriber adabere;). O juru m anya na nnukwu mmeghachi omume na post a! Ọ dị ka mmadụ ole na ole na-eche maka ọgbakọ iji gosipụta afọ ojuju ha.
BTW… na onye ọzọ m kwuru banyere gị bụ gị. 😉
Ihe na-akpali mmasị. Daalụ maka isiokwu ahụ. Ọ na-atọ gị ụtọ mgbe niile ịhụ ụzọ ọzọ (ọtụtụ ihe mmadụ na-agụ gbasara 37signals online bụ otuto na-egbuke egbuke).
Emechara m kagbuo akaụntụ Basecamp m, mana karịa iji eziokwu ahụ bụ na arụmọrụ ahụ abụghị naanị ihe m chọrọ.
Nwere ike ịchọta isiokwu a na-atọ ụtọ:
37Signals: Business Bloat v. Njirimara Bloat
Anyị gbanwere site na Basecampe gaa na n'efu (ma dị mfe) TaskFreak izu gara aga. Anyị hụrụ ya n'anya, anyị anaghịkwa ele anya n'azụ.
Nke a na echetara m na m kwesịrị ịkagbu akaụntụ. M na-eji ya na ọnwa na ọ bụ mgbe ọ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ m chọrọ iji ma emeghị.
Lee ya Basecamp.
Akagbu ya ugbu a.
Ọ dịkarịghị eji ya, ndị ahịa m anaghịkwa eji ya eme ihe (dị ka ọ pụtara site na ụbọchị nbanye ikpeazụ). Akpọ ha ha n'ụtụtụ a, na-ajụ ma m ga-edebe ya. O juru m anya (?) Na otu onye n’ime ha (4) siri Mba!
PS, email m nye ha:
“O nweghi ihe jikọrọ ya na esemokwu 'f-okwu' a,
ị nwere ike ịkọcha ihe niile masịrị gị, yabụ m…
Ihe bụ nsogbu bụ na m jidere onwe m ka m na-akọcha MGBE m na-eji ya
Ngwá ọrụ gị na achọpụtawo m na ọ siri ike nnweta / idebe
ndị ahịa m iji BackPack.
N’oge na-adịbeghị anya, etufuru m ọrụ / ndị ahịa n’etiti ụzọ n’ihi ihe ọjọọ
nkwurịta okwu (na BackPack rụrụ ọrụ dị mkpa na nke a).
Ajụjụ ọnụ a gbara ajụjụ ọnụ n'ụtụtụ a kpughere ndị ahịa m niile na-akọcha ya, yabụ mkpebi dị mfe…
FYI, ụfọdụ n'ime m / qualms ha:
- Mmekọrịta na email na 'arụmọrụ' na-arụ ọrụ adịghị mma /
enweghị (ọ dị ka HighCise's cc-email nwere ike ịbụ
obere nke azịza)
- Saịtị bụ nnọọ ngwa ngwa
- Nhazi faịlụ-ezughi ezu yana kwa isi
- Ngwaọrụ anaghị arụkọ ọrụ nke ọma (akwụkwọ edemede, afọ 1 gachara, ka ọ bụrụ ihe mgbochi 'meta-tuondu ume ?, yabụ bọtịnụ nchọgharị dị mfe anaghị arụ ọrụ)
- Mpempe akwụkwọ, akụkụ ọkacha mmasị m na saịtị gị, na-arịa ahụhụ, ngwa ọrụ nhazi dị mfe (otu onye ahịa gwara m na ọ nọrọ ọtụtụ awa na-anwa ịnweta ndepụta ndị edepụtara ederede ziri ezi)
- Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, dịka m chọpụtara, mbupụ data bụ ihe jọgburu onwe ya. WTF na-eche maka mbupụ XML, mana m ga-ebudata faịlụ niile iche, chekwaa bọọdụ ederede iche, wdg. ”
Na-ebubu ụzọ, mana oge ndị a bụ oge ọsọ ọsọ ma echere m na oge eruola ka ị jiri nlezianya nyochaa onwe gị. ”
Maka ndekọ ahụtụbeghị mgbe anyị kwuru "anyị ziri ezi, onye ọ bụla ọzọ ezighi ezi" ma anyị ekwenyeghị "anyị ziri ezi, onye ọ bụla ọzọ ezighi ezi"
Anyị na-ekekọrịta naanị ihe baara anyị uru. Ọ bụrụ na ha niile na-arụrụ gị ọrụ, dị ukwuu. Ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime ya na-arụ ọrụ maka gị, ọ dị mma. Ọ bụrụ na ọnweghị nke ọ bụla n'ime ya baara gị uru, nnukwu. Were uru ọ bụla ị hụrụ wee hapụ nke fọdụrụ.
I nwere ike ileba anya n'isiakwụkwọ a site n'akwụkwọ anyị:
"Take na-ewere nke ukwuu nke oji na ọcha echiche."
Ọ bụrụ na ụda olu anyị dị ka odika-ama-ama, buru anyị. Anyị na-eche na ọ ka mma iji echiche dị iche iche mee ihe karịa ka anyị bụrụ ndị na-enweghị isi banyere ya. Ọ bụrụ na nke ahụ bịara dị ka ihe nzuzu ma ọ bụ mpako, yabụ ya. Anyị ga-abụ ihe mkpasu iwe karịa ka mmiri niile gbadaa na “ọ dabere…” N’ezie a ga-enwe oge mgbe iwu ndị a ga-agbatị ma ọ bụ gbajie. Na ụfọdụ n'ime ụzọ aghụghọ ndị a nwere ike ọ gaghị emetụta ọnọdụ gị. Jiri mkpebi na echiche gị.
Nke mbu - daalụ maka ịzaghachi. Echeghị m na obere post a ga-ewepụ dịka o siri mee. Enwere m olile anya na ị nwere ike ile anya karịa nkwenye ị na-ezo aka na akwụkwọ gị ma gee ntị n'ihe ọtụtụ ndị na-ekwu na post a.
Ebe ọ bụ na ị na-ehota akwụkwọ gị, m ga-atụba amaokwu ole na ole:
1. Ọ dị ka ọ bụ ezie na ị bụghị were ndị ahịa ziri ezi ụgwọ.
2. Nke gi àgwà nke ngwaahịa gị nwere ike inwe ụfọdụ flaws na mkpa anya na.
3. Na-agbago Blog Wave nwere nsogbu ya na mgbada ya.
Dika m kwuru na ihe odide mbu m - Inweta Ezigbo-akwụ elele oge ma m ka bụ onye ofufe. M ga-agbagha ndị otu gị iji nyochaa ọnọdụ blog gị. Ọ dị oke njọ ma enwere m ntụkwasị obi na enwere ike ịtụda ya iji nyere aka kụziere ndị ọzọ ma ghara ịkatọ ha.
Maka onwe m, akwụsịrị m ịbụ onye ahịa 37S dabere na ahụmịhe nkwado. Mgbe m nwesịrị nsogbu mwube ụfọdụ ọrụ Basecamp, Edere m ya ka m jụọ ihe kpatara egosiputara ọrụ ndị ahụ dịka nke ndị ahịa m karịa m. Nzaghachi a bụ otu ụzọ n'okirikiri “Hi Todd. Ihe oru ngo a jikọtara ya na onye ahịa ya n'ihi na ọ bụ onye ọrụ ahụ metụtara "ma ọ bụ ihe dị nso na nke ahụ. Okirikiri, enweghị enyemaka, ma kilomita dị anya site na ezigbo mkpa, nke bụ ịmata etu esi agbanwe ya (duh).
Arịrịọ nkwado nke abụọ nwetara ụdị ọgwụgwọ a - ọsọ ọsọ, na nzaghachi nzaghachi nke na-enweghị ihe ọ bụla nyere aka, na usoro nke "ọ bụ etu ọ dị n'ihi na ọ bụ otu ahụ ka ọ dị." Achọpụtaghị arịrịọ ime mgbanwe nke ngwanrọ ahụ site na nkwukọrịta nkwado ahụ.
Ihe m na - ewepu m bụ mmetụta nke 'ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na imepụta anyị, gaa ebe ọzọ,' ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ edela ha.
Douglas, blọọgụ anyị abụbu otu ihe kamgbe afọ 1999. Blog anyị nwere otu olu anyị ji agwa onwe anyị okwu. Anyị echepụtaghị ụdị uwe a na-eyi uwe maka nkwukọrịta ọha anyị. Anyi bu ndi anyi bu - ma na ndi ozo. Anyị anaghị eme ngọpụ. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na nke a. Ọ dị m ka ya bụrụ na ọtụtụ mmadụ na ụlọ ọrụ dị otu a.
Anyị na-ekekọrịta echiche anyị na-enweghị iyo. Nke ahụ bụ otu anyị si eme ihe oge niile ma ga - emekwa ihe. Anyị kwenyere na ọ ka mma ịbụ onwe gị karịa ịbụ onye ọzọ - n'agbanyeghị ọnọdụ. Mgbe ụfọdụ anyị na-a swearụ iyi. Nnukwu azụmahịa. Mgbe ụfọdụ ị na-akpọ anyị "amaghị". Nnukwu azụmahịa. Ha abụọ na-ewe iwe ma ọ bụrụ na ị na-achọ ohere iji wee iwe.
Anyị agbalịbeghị ime ka mmadụ niile nwee obi ụtọ. Anyị ghọtara na ụfọdụ mmadụ achọghị ka anyị si ekwu okwu ma ọ bụ otu anyị si eche echiche ma ọ bụ omume anyị. Nke ahụ dị mma. Enwere ọtụtụ ndị na-enweghị mmasị na gị. Nke ahụ dị mma. Nke ahụ bụ ndụ.
Ebe ọ bụ na ị nwere nzaghachi maka anyị, enwere m nzaghachi maka gị. I kwuru, sị: “Abọchị ole na ole gara aga, blog ha webatara ihe ọzọ na-amaghị nke a na-akọ.” Banyere: http://www.37signals.com/svn/posts/357-people-dont-scrollemails
Ndi ndi mmadu kwenyere na anyi kwuru bu ndi nzuzu? Are makwara gị mma ịkpọ ndị a niile amaghị? Richard Bird ọ bụ amaghị ihe? Ndi Steven Bao amaghị? Ben Richardson ọ bụ amaghị? Amie Gillingham amaghi ihe? Dave Rosen amaghi ihe? Ndi Scott Meade si na Ekele kesara ndi nzuzu Anthony Casalena si na SquareSpace amaghi kwa? Josh Williams si na BlinkSale amaghi ihe? You ga-eziga azịza na blọọgụ gị ma ọ bụ nke anyị na-ekwu na ndị a niile amaghị ihe? Ma ọ bụ na ị gaghị eguzo n'azụ okwu gị? I putara ihe i kwuru?
Ryan ọ amaghị maka ikenye nke a?
I nwere ike idoputa “amaghi ihe” maka nkwuputa nke kwesiri ya dika ịkpa ókè agbụrụ, nkwesi olu ike, ịtụ onye ọbịa ụjọ - ọ bụghị echiche mmadụ banyere ogologo email.
O doro anya na ndị ahụ amaghị. Ha enweghị ebe ikwusa ozi ọma nke blog gị nwere. Ha na-aza ajụjụ ma na-akwado dabere na echiche nke onwe ha. Ryan abụghị onye na-amaghị ihe. Ọ na-enyekwa echiche ya. Ana m akwanyere nke ahụ ùgwù. Ma n'ezie, maka ụfọdụ, nghọta ahụ bụ eziokwu. Ikekwe ndị ahụ anwalela ma chọta usoro ihe ịga nke ọma na usoro ahụ.
E gosiputaghi ozi gị dị ka echiche, e gosipụtara ya dị ka eziokwu. Ekwere m na ọ bụ amaghị ihe. A na-akọwa amaghị ihe dị ka enweghi ihe omuma ma obu ihe omuma banyere otu okwu ma obu eziokwu. O nweghi ihe jikọrọ ya na ịkpa ókè agbụrụ ma ọ bụ ajọ mmadụ, wdg.
N'eziokwu, ọ dịghị mkpa ịzaghachi, Jason. Ikpe ikpe site na nzaghachi gị, nkwupụta m niile bụ eziokwu. Da olu agbanweela. Nke ahụ dị nnọọ njọ. Nke oma diri gi na ulo oru gi.
Echere m na ihe ị theụ iyi bụ ihe na-abụghị okwu. Na nke a, ọ gbakwunyere mmesi ike kwesịrị ekwesị. Anyị abụghị ụmụaka. Anyị na-ekwu okwu otú ahụ. Ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ m na-eme.
Mana 37 Signals blog na-eti m ihe dị ka aghụghọ. Ortdị nke a "anyị chọpụtara na ihe na-ezighị ezi banyere ihe a".
Douglas, ugbua ị na-ada dị ka onye emerụrụ emerụ. Jason biara na blog gi ịhapụ ihe o kwuru ma ugbua i gwa ya ka o ghara iza? Kedu ụdị omume ụmụaka bụ nke ahụ?
Na-erute na-atụ aro na ekwuru na post Jason bụ eziokwu. Ọ bụ echiche dabere na ahụmịhe ya. Ọ bụ mpempe / echiche (ederede / ederede). Nchoputa sayensi bu eziokwu. Echeghị m na Jason ga-ewere post ya dị ka sayensị, ma ọ bụ eziokwu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ karịa naanị echiche ya dabere na ahụmịhe ya.
Na tupu ị na-akatọ, gịnị ma ị jụọ ya nwayọ ma ọ bụrụ echiche ya ka ọ bụ eziokwu? Eji m n’aka na ọ ga-enwe ọ happyụ ịza gị. Mgbe ahụ ị ga-amatakwu banyere nzube ya. Can nwere ike ịme echiche ma ọ bụ ịnwere ike ịmata eziokwu ahụ.
Nke ikpe azu, ahughi m otu isi gha ekwu na otu onye amaghi ihe ma ndi ozo ndi ya na ha no adighi. Ọ baghị uru n ’onye mbu kwuru ya na ebe ya kwuru ya. Ha niile kwenyere. Ndị nkọwa ahụ na-akwado ọnọdụ Jason. Yabụ ị kwenyere na ha niile amaghị ihe ma ọ bụ na enweghị onye n'ime ha amaghị. I nweghi ike ilekọta mgbe ha nile kwenyere.
1. Re: Mgbu Onwe Mgbu - Agwụ? Eeh. Edere m akwụkwọ ozi iji weta ụfọdụ nchegbu m dị ka onye ahịa mbụ na onye nwe ụlọ ọrụ na-abịa na blọọgụ m wee hapụ ha. Ọ na-ajụpụkwa onye ọ bụla kwuru okwu na-adịghị mma. Nke ahụ dị nwute - echere m maka ihe ọzọ. Ọnwụ? Eeh. Etufuru m oge na ego itinye ego na ngwa ọrụ nke m na-enweghịzi ike iji.
2. Jason kwuru na nke a bụ echiche, ma soro isi nke 1 nke akwụkwọ ya na-ekwu na blog bụ echiche. Nke m nghọta (nke ahụ bụ uche m) dị iche na m kwupụtara ya.
3. Jason kwuru na ọ bụ echiche ebe a, achọghị m ịjụ ya. Nakwa, cheta ihe kpatara m ji pụọ abụghị naanị ọkwa a - ọ bụ ntopute nke ụda na enweghị nsọpụrụ maka SvN yana ịghara iji sọftụwia na-eduga m ịhapụ. Ọ bụghị otu mmemme ọ bụla, ọ dị ọtụtụ.
4. Re: amaghị: You're na akwado okwu m n’amaghị. Ọ bụrụ na SvN wepụta nkwupụta mkpuchi blanket na ọ dịghị onye na-pịgharịa email, ugbu a ndị mmadụ nwere ike ile ya anya dị ka eziokwu ma ọ bụrụ na egosiri ya n'ụzọ ahụ. SvN amaghị maka ngosi ahụ, ndị na-akwado ya abụghị. Enwere ike ịghahie ha, ma ha abụghị ndị na-amaghị ihe. Ọ bụ kpom kwem ihe mere m ji see okwu nkuzi SvN - blọọgụ kwesiri ijide ọrụ mgbe enyere echiche ha dịka eziokwu.
Daalụ maka ịga!
ụfọdụ ndị yiri ka amaghị ihe banyere amaghị ihe.
Daalụ, Lupe. Ọ bụ ezie na anaghị m ele Wikipedia anya maka azịza m niile, ọ na-amasị m ikwu okwu a:
Nkọwa ọzọ na-ekwu na amaghị ihe bụ nhọrọ ịghara ime ma ọ bụ ime omume dabere n'ihe ụfọdụ ozi iji kwado mkpa ma ọ bụ nkwenye nke ha.
Nke a bụ, n’uche m, gịnị kpatara Email Scroll blog post na SvN amaghị. Ha họọrọ ịghara inyocha ma ọ bụ nye data dị mma iji kwado echiche ha. Na, n'eziokwu, nke ahụ dabara na mkpa ha ebe ọ bụ na ha na-agbanye usoro email ọhụrụ ha.
M na-akwado gị echiche… na ebe a bụ ihe ọzọ na tidbit m ụbọchị na American Express - nwalee “ọrụ adịghị pịgharịa gaa” tiori. Enwere m URL dị iche iche ejiri na njikọ dị na elu email ahụ na ndị dị na ala, nke ọma, “n'okpuru ogige atụrụ.” Na ndị nọ na ala na-pịrị nnọọ ka ndị nọ na elu. Ọ na-ekwu maka ogo na mkpa ọdịnaya ahụ. Ọ bụrụ na ọdịnaya gị adịghị mkpa, onye ọrụ ahụ maara n'ime ihuenyo mbụ wee hapụ ya na-enweghị ịgụ akwụkwọ ọzọ. Ozi email m nke nwere ihe onwunwe, ndụmọdụ, na otu esi eme maka ndị na-eme kaadị obere azụmaahịa, karịa ịpịpụta mgbasa ozi ma ọ bụ mkpọsa, na-ahụ ezigbo ego (yabụ ruo 70%) nke clicks sitere na njikọ na ala nke email ahụ.
Agbalịrị m basecamp maka ọrụ ndị ahịa, yana mgbe anyị debere ọtụtụ akwụkwọ na ọbá akwụkwọ / ebe nchekwa, emechara m mee ka onye ahịa ahụ gbanwee akwụkwọ google kama. daalụ maka okwu gị.
Kedu ihe kpatara eji akpọ mmadụ onye na-amaghị banyere echiche ha gbasara ogologo email? Okwu di oke nma n’ebe ahu maka uche nke mmadu. Ọ bụrụ n ’enweghị mmasị n’echiche mmadụ, kedụ uru ọ bara na ide ogologo post banyere ya ma dọrọ uche gaa n’ arụ gị dị nro site n’igosipụta amaghị ihe ndị mmadụ? Nweta ya ugbua.
Na-enwe nnukwu ahụhụ na otu onye na-ekwu okwu site na ahụmịhe ya! Biko, buru dimkpa ma ga n'ihu.
Ekwenyesiri m ike na a zara ajụjụ ndị ahụ.
O bu na uche adighi unu ndi mmadu ?! Ana m etinye ume dị ukwuu n’ịchọpụta ụzọ ndị ọrụ m ga-esi wepụ obere oge n’ịchọ ozi ịntanetị, karịa karịa. Ihe ruru isi: Ozi ịntanetị ugbu a bụ ihe ndọpụ na-enweghị nchịkwa. Kedu ihe kpatara, n'ụwa, mmadụ ọ bụla ga-ekwu na ịdị omimi email bụ atụmatụ mara mma?
Ndị ọrụ na-etinye obere oge na email na oge karịa na ekwentị ma ọ bụ ihu na ihu na-arụpụta ọtụtụ ihe, ekwenyere m.
Ọ ga-amasị m ibelata olu nke ozi ịntanetị m nwere ọkara, mana ogologo nke ọdịnaya dị na ozi ịntanetị ndị ahụ adịghị ebipụ ma kpọọ nkụ. Echere m na enwere ezigbo ihe mere ị ga - eji nwee ogologo oge vs. mkpụmkpụ. html vs. ederede, wdg.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa oge n'ịgụ akwụkwọ, ka anyị wepụ nkwekọrịta na usoro iwu mumbo jumbo ndị ọzọ. Akwụkwọ ahụ na-emebi oge karịa ma na-efu anyị ọtụtụ ihe kwa elekere iji kwụọ ndị ọka iwu ịkọwa ya!
Daalụ maka ịkwụsị!
Onye ọrụ ọzọ
Ọ dị mma, agbalịrị m iji basecamp n'otu n'ime ọrụ ahụ ma ọ nweghị ndị otu egwuregwu m zụtara n'ime ya. Ma eleghị anya, ọ bụ ụdị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ, mana achọpụtara m na ọ bụ ezie na m dị njikere itinye oge iji ghọta ihe ndị ahụ, ọtụtụ ndị so n'òtù m abụghị.
O siri ike igbanwe ihe ndị dị mkpa ma ọ bụrụ na ọrụ ụfọdụ dabere na ibe ha, ị na-atụ uche ihe ole na ole enweghị ụzọ ị ga-esi hazie ọrụ wdg.
Obi dị m ụtọ na m na - eji ụdị nnwere onwe ya akwụghị ụgwọ ọ bụla site na ịzụta ụdị akwụ ụgwọ. Mgbe obere oge gasịrị, ọ bụ naanị m na-eji bọọdụ na wdg, ma na-eji ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ nke sistemụ IM (ọzọ n'ime ngwaahịa ha). Nnwale anyị na basecamp dị ka ihe eji arụ ọrụ ngo bụ nnukwu ọdịda. The interface bụ ụdị nke quirky na-adịghị agbanwe agbanwe (dị ka nke 8 ọnwa gara aga - adịghị abanye na-adịbeghị anya m na-eche)
Echere m na ha na-anụ ọtụtụ nke koolaid nke ha na ụzọ m niile ma ọ bụ ihe okporo ụzọ agaghị arụ ọrụ ogologo oge. Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ị kwue na ị na-ebute ndị ahịa gị ụzọ, kedu ka ị ga-esi mee ka eleda ha anya ma tụgharịa uche n’ihe niile dị ka a ga - asị na ị ma eziokwu niile na ndị ọzọ niile bụ sọsọ. ?
The “f-bọmbụ”? Kedu mgbasa ozi ** che.
Ekwenyesiri m ike na 37signals na-eche na ụfọdụ ube na-enwu gbaa na uwe anaghị achọ ịchacha ha ọzọ.
Echegbula… Ekwenyesiri m ike na ị ga-ahụ bandwagon ọhụrụ ka ọ wụpụ ugbu a na 37signals abụghị ụdị ejiji.
Ouch Frank! "Turd na uwe" - nke ahụ mere ka m chịa ọchị. Biko gbaghara mmezi, ndị ọzọ na - agụ akwụkwọ m nwere ike ha enweghị ekele maka ọchị.
Ejirila m Basecamp na ndị ọrụ m ikpeazụ. Anọ m na-akatọ ya, nke ka ukwuu n'ihi na Jason Fried & co bụ ndị na-eme ihe ngosi ma na-ekwu eziokwu na ngwa ha niile bụ otu nchekwa data na-eji obere UI dị iche. Mgbe m na-eme mkpesa banyere ha, ọ bụkwa m bụ onye kachasị eji basecamp. Ugboro ugboro a ga - ajụ m "kedụ ebe akwụkwọ maka nke a?" m ga-azaghachi, “na Basecamp… ebe o kwesiri… ziri ezi?” N'ikpeazụ onye nke abụọ mere ka m melite wiki mpaghara, nke nwetara a ọtụtụ nwekwuo ojiji n'ihi na o doro anya na ọ na-esiri gị ike inweta ihe ọmụma na ebe nchekwa data nke blog. 🙂
Ebe ọ bụ na amalitere m freelancing, ana m eche na m ga-aga nweta akaụntụ basecamp ma tinye ya, na-eche ka ọ dị mkpa. Ọ ghọbeghị ihe dị mkpa ma… ma ugbu a, echere m na ọ nwere ike ọ gaghị.
Amachaghị m nke a, mana f-okwu-ojiji nwere ike bụrụ ihe sitere n'ike mmụọ nsọ nke ihe nkiri Agwọ dị n'ụgbọelu nke jiri okwu a mee ihe gabiga ókè. Mgbe ụfọdụ, a na-akpọ ihe nkiri ahụ dị ka "Agwọ n'ụgbọ elu ****** g" n'ihi nke a.
Achọghị m ịma ka ndị mmadụ na-akọcha na weebụ ọ bụrụhaala na ọ dị n'ime oke na gburugburu ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, m na-eleghara ya anya.
Na 24, ịbụ ihe ngosi maka ezinụlọ dum, anaghị ekwe ka ha kọchaa. Naanị nkwupụta nke iwe bụ "Damn it" - nke kpaliri ụfọdụ ụmụ akwụkwọ kọleji ịmalite egwuregwu ị ofụ ihe ọ drinkingụ drinkingụ oge ọ bụla Agent Bauer jiri ahịrịokwu ahụ.
Mgbe ndị ode akwụkwọ chọpụtara banyere nke a, ha bidoro inye nri ahịrị ndị “damnit damnit damnit” naanị iji hụ ụmụaka ahụ ka ha na-ewepu agbapụ atọ n’usoro.
Naanị iji weghachi ọchị na mkparịta ụka a.
My reactions to "Inweta Real" nwere ike ịbụ na akaghi aka ma na-aghọ nke dabara adaba: Isiokwu ya bụ otú oyi ọ dị ịbụ 37signals na-ere $ 19 PDF ka nnukwu na-asacha.
Lekwasị anya na ORGware
maka ọkwa, soooon. Ọ ga - abụ akụ ị na - achọ.
Nke a bụ ndị Board of Advisers anyị.
ha biri site na mma agha, ma ugbu a, ọma… ..
F *** gị Douglas Karr. Ekwetaghị m na nkeji na 'f-bọmbụ,' dịka ị na-etinye ọchị n'ụzọ aghụghọ, ọ bụghị ihe kpatara ị jiri sọftụwia ahụ. I jiri otutu ederede gbalịsie ike ime ka anyị kwenye na ọ bụghị ya na ị daa nke ọma. Echere m na onye ọ bụla nke na-ekwu ntakịrị okwu, echefula onye na-ede blọgụ 'ịzụ ahịa' dị nsọ, ga-agwarịrị ya nchegbu ya ma ọ bụrụ na ọ dị.
Dika 'onye okacha amara ahia ahia', buru onye ahia ahia mmanu. Dịka m nwere ike ịgwa gị, ị ga-abụrịrị ezigbo njọ na ya.
F *** gị Douglas Karr. I lee kwa goofy anya.
Adị m n'ezie dị goofy? Dang, nke ahụ bụ akara kacha mma m!
Nke ọma, echere m na ịkọwapụta azịza a na-ekwu maka onwe ya.
Dị ka ogologo oge na-agụ Doug's blog m nwere mgbawa na-ekwu na ọ dịtụbeghị gafee dị ka goofy.
Jeez, Enwetụbeghị m ihe ngosi 37, mana site na ụzọ ike ha si agbachitere ha, etinyeghị m mmasị na ịchọkwu…
Onye ọrụ Antoher
@ John Beeler: know ma na ihe a na-adọrọ mmasị. M na-eche ihe kpatara ihe eji eme ihe niile na-eji otu ihe nwere nnukwu nsogbu. (Ma a ga - achọrọ "ịnara gị" n'ihi na DHH ma ọ bụ ụfọdụ pontif wannabe gwara gị ya ..)
@defenders of the cult: SvN na ndị ọzọ nke ụlọọrụ a na-agwa ndị mmadụ okwu. D.Karr nwere isi? Ebee ka data ma ọ bụ akwụkwọ nkwado dị? Ee, enwere m ike ịhụ isi na maka ndebanye aha email, ọ na-enyere aka mee ka ha dị nkenke na ruo n'isi, mana ị maara, ozi ịntanetị ndebanye aha dịkwa mkpa na ndị mmadụ nwere uche zuru oke iji chọpụta ma hazie ihe dabere na nke ahụ.
Onwe m, mgbe m natara email ndebanye aha site na, kwuo onye na-eweta nnabata, yana ọ dị peeji 3 ogologo, enweghị nsogbu, achọghị m ozi ịntanetị 4 dị iche iche na-agwa m na akaụntụ ahụ edoziri, onye ọzọ na-agwa m na m shei id ọzọ na-agwa m ebe m ga-enweta enyemaka na ọrụ ndị ahịa na onye ọzọ na-agwa m url na webgui iji jikwaa akaụntụ m. Nke ahụ bụ nnọọ ụzọ oke mbugharị.
Ihe m chọpụtara banyere 37S bụ na ha na-emebi iwu nke aka ha ma nke a na-emetụta site na Rails na SvN na ndị ọzọ niile na-akwado ha (TextDrive na Textmate onye ọ bụla?) Na-asọ na-enweghị igosipụta njikọ ego ha na ụlọ ọrụ ndị a.
Rails na-ekwu na ọ ga-akọrọ ma ọ bụ egwu jọgburu onwe ya! ọ bụla ngwa na-achọ ya oyiri nke kpuchie! ị ghọtara ihe pụtara na nke a? Lelee ụlọ ọrụ RailsDay2006. Otu narị ntinye ga-ewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1.5 GB nke ohere!
Nke a bụ oke mmebi iwu nke DRY.
Ahụrụ m na enwere ọtụtụ mkparịta ụka ebe a, mana echere m na m ga-etinye cents m abụọ. Achọghị m ịma banyere ọbụbụ ọnụ. Enwere m mmasị n'echiche ahụ. Echiche niile banyere ụfọdụ mkpụrụ okwu na-ewe iwe karịa ndị ọzọ bụ nzuzu.
Mana nke ahụ abụghị isi okwu. Enwere m ike ịhụ esemokwu ahụ sitere na ụmụ okorobịa SvN. Ọ bụrụ na ị kwuo ihe, kwuo ya na nkwenye siri ike ma ọ bụghị nke a mmiri mmiri s *** nke ahụ yiri ka ọ bụ ihe nkịtị. Ọ bụrụ na i kwenyesiri ike n’ihe, kwuo otú ahụ, ekwula ya ọzọ.
Agbanyeghị, aga m etinye ihe na nke m chere na-efu na ọnọdụ a. Ọ bụrụ n youhie ihe banyere gị, kweta ya ma gaa n'ihu. Onweghi ihe ojoo n’edighi nma. Ọ nwere ike gbaa ntakịrị, mana ịchọta ihe ziri ezi kwesịrị ya. Ọ bụrụ na i were echiche na 'anyị ziri ezi na nke ahụ bụ' ị hapụla ụzọ ntụgharị uche wee banye na ngalaba nke nkwenkwe. Anaghị m ekwu na ụmụ okorobịa SvN emeela nke ahụ. O doro anya, ha na-enwe echiche banyere ihe ha na-eme, nke na-arụ ọrụ nke ọma maka ha.
Isi okwu ọzọ nke i kwuru na ọkwa izizi gị, nke m chere na ọ bara uru ikwughachi bụ nkwupụta okwu na-enweghị data iji kwado ya. Ọ dị oke mkpa na data dị. Ọgụgụ isi abụghịkwa ihe a ma ama, na, dịka ahụmịhe kụziiri anyị, ọ nwere ike bụrụ ajọ njọ mgbe ụfọdụ. Otu n'ime ajụjụ ndị kachasị mkpa mmadụ nwere ike ịjụ bụ: "Ee, nke a bụ ihe ezi uche dị na ya, mana ọ na-egosi eziokwu (ọ bụ data dị ebe ahụ)?"
Enweghi m ike ka ndị mụ na ha rụọ ọrụ jiri basecamp, mana ejighi m n’aka ma ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu Basecamp, ma ọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị eji ya / njikere iji ngwa ntanetị na ike ahụ. O doro anya, ndị mmadụ na-eji e-mail na ngwa ndị ọzọ n'echeghị echiche banyere ya, mana iji ya na-ewe ezigbo ọzụzụ mgbe niile, ma ọ bụrụ na ịrapagidesi ike na ya, ọ ga-adị ka ọ bụ ihe na-ekwekọghị n'okike. M na-arụ ọrụ na a University na ngalaba / mkpara ebe a bụ maa nnọchiteanya nke na. A naghị eji ha enweta ihe ndị dịnụ ugbu a, ha agaghị ewepụta oge iji mụta ha. Na ọtụtụ oge ha adịghịdị mkpa.
M na-agbalị na-ere Basecamp ka a ahịa otu ugboro, ha na-ahọrọ maka * ntuziaka usoro * mgbe ịlele ya.
Douglas - ọ bụrụ na ị na-achọ nkọcha-enweghị nnwere onwe, HTML-email nwere ike gburugburu ebe ị nwere ike ịlele ndu ndu anyị na ngwaahịa ahịa - http://LeadsOnRails.com. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ngwa desktọọpụ, ọ dịla ma na-aga n'ihu na-ewu ya site na nzaghachi ndị ahịa ụwa na-ege ndị ọrụ dị ka onwe gị ntị.
Echere m na akụkụ ya na 37s bụ DHH.
Ihe dị ka otu afọ gara aga, e nwere ọkwa na blọọgụ nke ya (na-agbachitere.com) na-ama ụra onye mmemme ọ bụla nke ga-aka enwe ọrụ 9-5 kama isonye na mbido na iji Rails. Ọ bụ otu ụdị echiche ahụ (dịka ị nwere ike ịkọwa ụda site na ntanetị) - ọ bụrụ na ị kwenyeghị m, ị bụ onye nzuzu.
Echetara m mgbe m hụrụ ọkwa a otu afọ gara aga mana ọ bụghị ụjọ nke sochiri. N'oge ahụ enwere m ihe ndị ọzọ na-eche n'uche m ma ugbu a, m laghachiri na nke a, m ga-ekwu 37 Omume mgbaàmà ahapụla uto dị njọ n'ọnụ.
Enwere ihe na agwa ha. Ee ịdị mma nwere ike ịbụ ezigbo nkọwa. Anọ m na-anata njedebe nke ụfọdụ weirdly unhelpful na terse ozi ịntanetị site na Jason na abụ m onye ọrụ mgbe niile.
Ike ha bụ n'ezie ke mbọn na n'ihi na m na-ekele ha. Ma omume dị ka nke a na-emebi ha ma o doro anya karịa ka ha na-aghọta ma ọ bụ na-achọ ịnakwere.
Ihe Matt nke 37S adịghị ka ọ ghọtara bụ na omume / ihe / ihe na-ebu * pụtara *. Ee, ikwuputa mmadụ nwere ike ịkọwa dị ka mwakpo, ịkwa emo ma ọ bụ ihe ọ bụla. Na-asị “anyị ekwubeghị….” adịghị mma. Ọ bụ mmụọ disingenous na ọbara-eche. Humilityfọdụ ịdị umeala n'obi na-aga ogologo oge. Nwere ike ịnweta nke ahụ wee gaa n'ihu "ịdị iche".
Na-agbanye na ngwaahịa ha, akwụsịrị m iji Basecamp kpọrọ ihe n'ihi na dị ka ọtụtụ ndị achọpụtara m na ndị ọzọ enweghị mmasị n'ezie. Echere m na ngosipụta "dị mfe" nwere ike ịbụ ihe mgbochi. Ndị mmadụ anaghị ahụ ike ma ọ bụ ihe kpatara nke a ji dị mma karịa usoro nke ozi ịntanetị. Anọ m na-ekwu maka ndị mmadụ nọ ebe a bụ ndị ga-erite uru site na ịmalite idei mmiri email. Ọ bụ ezigbo ngwaahịa mana ọ chọrọ ume ume, nke Jason kwuru na-abịa na nzaghachi nye otuto m banyere Highrise.
Agbanyeghị, enwere m olile anya na ha agaghị ezu ike ọzọ. E nwere ebe ole na ole doro anya na Highrise na ha kwesịrị ilebara anya yana dị ka onye ahịa na-akwụ ụgwọ - ọzọ - Aga m ele ha anya.
Mee 13, 2007 na 4: 34 PM
Akwa post! Mụ onwe m kagburu akaụntụ basecamp m na nso nso a. Adịla ngwa ngwa ịgbanwe gaa na ngwa desktọọpụ n'agbanyeghị, enwere ụfọdụ ụzọ basecamp ndị ọzọ dị ugbu a: Goplan na OnStage naanị ịkpọ aha ole na ole.
Ezigbo SirZ, ka anyị chee ya ihu: anyị agaghị achọ ịtụle ngwa ọrụ na blọọgụ ha ma ọ bụrụ na afọ ojuju anyị kpamkpam. Agbalịrị m basecamp ma chọpụta na ọ dị njọ maka ọrụ anyị. Ọ bụghị ọrụ njikwa ọrụ mgbe emechara. Lelee edemede a na PCworld.com. Echere m na ịgbanwere na nke a Adaba ngwá ọrụ, o yiri ka ọ na-akpali mmasị n'ezie.
Onye editọ @ WhyBaseCampSux.org
Ọkt 29, 2007 na 2:07 AM
Hehe. Ikwusara ndi ukwe ukwe. Ọfọn, belụsọ akụkụ gbasara gị ịbụ onye ofufe 37Signals; Ọ dịghị mgbe m nọ.
N'ihi na ndị na-achọ Basecamp ọzọ m chịkọtara nnọọ a ndepụta na m Basecamp Anụọhịa saịtị a:
Olileanya na a na-enyere ndị na-achọ ihe ngwọta njikwa oru ngo karịa Basecamp.
Ọkt 29, 2007 na 7:48 AM
O doro anya na, abụ m onye ahịa nke ụlọ ọrụ na-eji Basecamp ugbu a. Amaghị m na m na-ekwukarị na ọ na-a suụ… M na-eche na ọ na-enweta ọtụtụ mkpuchi ma ọ bụghị ibi ndụ na ya.
Dịka m na-eji ya ugbu a, nnukwu ọdịiche dị na njikwa ọrụ na ọrụ. Ọ ga-amasị m ịkwado ọrụ, kenye ha, nweta atụmatụ na mmecha (awa na ụbọchị) wee nweta ọkwa na ha (50%, 75%, 100%). Ihe ndị dị ugbu a na-enye onye ọ bụla ohere ibute ụzọ na ekenye.
Anọgidere m na ha ogologo oge, mana emesịa m nwee ụmụ nwoke a. N'ezie m tinyere ọkwa ikpeazụ m na bọọdụ ha taa (megharịrị n'okpuru):
“Ezie m emechala kagbuo akaụntụ m. Nye m mgbe ị na-ele ọrụ nke HR na mmachi ha na-etinye na ọkwa ọkwa ala, enwere ọtụtụ nhọrọ ọnụọgụ ma ọ bụ ọnụ ala dị ebe ahụ iji gaa ebe a. Ọ dị oke ọnụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya na ngwaahịa 37s ndị ọzọ dị ka paaki na / ma ọ bụ Basecamp. Kama iwere otu ngwaahịa ma mee ka ọ ka mma (dịka. Itinye mgbakwunye ọrụ HR n'ime paaki) 37s yiri ka ọ họọrọ ụzọ ị ga-akwụ ụgwọ nke ukwuu ọ na-aghọ ihe asọmpi yana enweghịkwa mwekota ọ bụla n'etiti ngwaahịa a. Ike gwụrụ m ike na “anyị maara ihe kacha mma” ndị ahịa na-atụ aro. Ọ bụ ihe ihere n'ihi na kemgbe kemgbe azu paaki dị, ndị 37s kwere m nkwa dị ukwuu, mana ọ dị nwute na ọ nwụọla. ”
Jenụwarị 27, 2008 na 2:02 PM
Nke a na-eme egwuregwu a ruo nwa oge mana achọrọ m ịnweta cents 2 m. Anyị na-adabere na ngwanrọ PM anyị. Ọgba aghara ya ma ọ bụrụ na anyị anaghị eme ka ndị ahịa anyị tinye aka na ndị otu anyị. N'ihi ndabere ahụ anyị ji Vertabase. Ha na-enye anyị nnukwu ọrụ ndị ahịa, ọzụzụ ma lekwasị anya na anyị - otu ezigbo ngwaahịa SaaS kwesịrị ịdị.
Nov 25, 2008 na 5:12 PM
FWIW, anyị si na Basecamp kwaga na SharedPlan. SharedPlan Central na-elekwasị anya na atụmatụ ahụ na nkwado nkwado dị mma. Gantt chaatị dị iche iche, ohere na-anọghị n'ịntanetị ya na ngwa ụmụ amaala maka Mac na Windows yana ruo ugbu a, enweghị mpako; ->
Feb 26, 2009 n’elekere 4:35 nke abali
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ mgbe post a gasịrị, enwere m mmasị ịnụ ihe ị na-eji maka njikwa ọrụ / nsuso ọrụ taa.
You na-enwe afọ ojuju (site na echiche ngwọta) na mkpebi gị ịhapụ Basecamp?
Anyị ahụla ọtụtụ ndị na-abịa n'ụzọ anyị (http://www.smartsheet.com) site na Basecamp n'afọ gara aga, ụfọdụ na-ehota ihe ndị yiri ya na ihe izizi. Ndị ọzọ na-egosi na ha na-achọ azịza ntanetị nke na - adighi pịa iji dezie.
Feb 26, 2009 na 2:16 PM
Nke a ga-abụ ajụjụ m ga - aza n’oge na-adịghị anya, Mak. Ekwenyesiri m ike na ọ gaghị abụ Basecamp - enwere m mmasị na ngwọta SaaS nke na-agbasi ike ịmatakwu atụmatụ na mbanye na ngwa ha. Ugbu a, anaghị m arụ ọrụ njikwa ọrụ ọ bụla - mana nke ahụ ga-agbanwe n'oge na-adịghị anya.
Lelee http://www.teamworkpm.net - Ha nwere onye mbubata Basecamp na ụmụ okorobịa a! Ha were Basecamp ma mechaa tinye ihe niile anyị rịọrọ.
Mee 11, 2009 na 5: 20 PM
Basecamp na Steroid, mwepu 37s fluff 🙂
Jun 15, 2010 na 10:18 AM
M na-eche ihe mgbu gị banyere oru ngo management, M hụrụ ya n'anya na ọ na-enyere m aka nke ukwuu mgbe na-eme guzozie eme na web mmepe. Joomla nwere nnukwu ihe na-aga n'azụ saịtị ahụ ma enwere ike ịnweta ya n'ihu. Enweela m ntọala nke a na saịtị maka ndị ahịa, ọ dị ka ha anaghị eji ya. Ọ dị oke egwu maka ijikọ akụ saịtị!
M ga-elele iGTD m na-achọ ihe dị ka nke a ma enwere m obi ụtọ banyere ngwá ọrụ a
Nov 10, 2010 na 4:23 AM
Ndo ebe a ka iwe gị. Sọftụwia karịrị teknụzụ… ọ bụ maka ndị nọ n’ahịrị bọtịnụ. Dịka onye ọrụ na onye ọrụ, ana m agba gị ume ka ị lelee Clarizen, ihe nrite mmeri 2010 n'ịntanetị Software Management Software.
A ike oru ngo Software na ọtụtụ ọcha dị ka oge management, akụ management, ego management na mwekota na SalesForce, Attask, Google….
Okwesiri ile anya ..
Jenụwarị 13, 2011 na 6:58 PM
Ọfọn, dịka nke taa m laghachiri na Basecamp! Ekele dịrị @howeleadership onye gwara m banyere ya!
Doug ị nwalere nke ọ bụla n'ime ndị asọmpi a kwesịrị ekwesị nke ezigara n'okpuru tupu ị laghachi na basecamp. Onwe m na-ewute m nke enweghị nzukọ na enweghị traction mgbe m tinyere ndị Mac na Basecamp. Emechara m sụọ ngọngọ na ngwakọta agbakwunyere. Aga m akpọ ya usoro azụmahịa nke na-enye ndị ọrụ ibe, ndị ahịa, ndị ndụmọdụ, ndị na-ere ahịa, ndị nweere onwe ha, ndị otu ụlọ ọrụ ohere ịbanye n'igwe ojii na-emekọ ihe ọnụ.
Ngwaahịa m na-eji nwere nnukwu ọrụ / njikwa ọrụ, usoro kalenda usoro ihe omume, usoro nyocha usoro ọrụ, njikwa kọntaktị, forums, nkata ndụ, nnọkọ igwefoto weebụ, nkesa ihuenyo dị ka atụmatụ enwere ike ịnye ndị ọrụ na otu ọ bụ ụzọ dị jụụ. Gbalịa ya a http://www.same-page.com
Jenụwarị 13, 2011 na 7:09 PM
FYI - Naanị m "gbadaa". 🙂
Feb 25, 2011 na 9:49 PM
Egwu Post! Anọ m na-anakọta ozi dịka nke a maka ụlọ ọrụ m wee dee blog nke m ihe kpatara anyị ji arapara na Basecamp. Lelee ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ: http://lab.neo-pangea.com/blog/2011/02/basecamp-sucks-less-than-everything-else/
Onwe m, m na-eji Basecamp n'ihi na ọ dịrị ndị otu m nfe karị. Echere m na ọ dị mkpa ịnweta sọftụwia njikwa njikwa ọrụ nke igwe ojii.
Nwere ike ịchọ ịlele ihe m kwuru na Basecamp, yana na mma karịa Ọrụ otu
Mee 8, 2011 na 6: 37 AM
Anyị na-eji basecamp na Social Media Magic iji kesaa echiche na soro ndị ahịa kpọtụrụ. Anyị enweghị nsogbu ọ bụla na ha. Adịghị m n'ezie ịgụ blọgụ ha ọtụtụ, mana ọ ga-ekwe omume na ọ bụ naanị echiche onye edemede ahụ. Agaghị m ekwe ka echiche nke otu onye edemede mee ka m kwụsị ngwa dị otú ahụ bara uru. Kedu otu ngwa ọhụrụ si arụ ọrụ maka gị? M na-atụ anya na mmekọrịta gị na gị n'ọdịnihu!
Jul 20, 2011 na 8: 27 AM
Enwere ọtụtụ ndozi ojiji enwere ike ịme Basecamp. O juru m anya na ọ nweghị nzukọ ọzọ etinyere n'ime ya. Wayzọ ọ si arụ ọrụ enweghị ebe doro anya ihe akpọrọ aha ya mere ndị ọrụ ọhụụ batara na ọrụ guzobere ga-akpọtụrụ onye ọzọ iji chọta ebe ịchọta ihe. (Ee, Oge ụfọdụ ị nwere ike ịchọta ihe n'ime ọchụchọ mana ọ bụghị mgbe niile.)
M nọnyeere gị n'iji okwu 'f' eme ihe. Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, ana m ahapụ okwu cuss ka iwepu ya, ọ nweghị ihe ngọpụ maka ịghara ijide ya mgbe ị na-ede ihe. Ekwenyere m na ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù nye ndị na - agụ akwụkwọ gị na ekwesighi ekwenye maka ụlọ ọrụ agwakọta. O doro anya na e nwere ebe dị iche n’etiti otu esi ekwu okwu mgbe gị na ndị mmanya na-egbu gị na ndị ọzọ na-ekerịta n’ihu ọha.
Chei! Naanị ịhụ ọkwa a ma gụọ ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ndị a kwuru. Ọtụtụ panties na ụyọkọ. Amalitere m iji Basecamp na nso nso a ma enwere ọtụtụ obere ihe na-enye m nsogbu na ya. Otu n'ime ha bụ na enweghị m ike ikwenye na enweghị m ike pịnye ụbọchị, aghaghị m ịhọrọ ụbọchị site na mmapụta. N'ezie? M na-eme ihe ojoo? Anyị ga-ahụ otu o si aga.
Sep 1, 2011 na 6:23 PM
ehee, ndị blog posts si 2007 o yiri ka… nke na-eduga m ihe na n'ezie annoys m. Kedu mgbe edere ederede a? 2007, 2008, ụnyaahụ? n’etinyeghi akara ubochi olee otu m ga esi amata ozi m na-agu ka bara uru taa.
Ekwenyesiri m ike na e nwere ezi ihe kpatara na ịghara ịgụnye ụbọchị na post, mana site na onye ọrụ, ọ na-eme nzuzu.
btw, M na-eji basecamp ka - Ekwenyere m, ọ nwere na ọ nwere ihe dị njọ, mana mgbe ejiri ya na ngwa ndị ọzọ dị na mpụga ị nwere ike ịrụ ọrụ n'ọtụtụ nsogbu. Enweghi mkpesa ọ bụla sitere n'aka ndị ahịa banyere ike iji ma. naanị 2 cents
Sep 2, 2011 na 12: 48 AM
Ọ bụ afọ ole na ole gara aga, David. N'ụzọ dị… M laghachi na Basecamp ugbu a. 🙂
Nov 29, 2011 na 5:55 PM
M ka bụ onye na-akwado 37signals, agbanyeghị na m kagburu akaụntụ Basecamp m. Ha kere ngwaahịa pụrụ iche na nke kensinammuo… oge ahụ. Ugbu a, m na-atụ anya ọzọ. Amalitere m iji KanbanTool n'oge na-adịbeghị anya - enwere m ezigbo mmasị na interface. Olileanya na otu ụbọchị m ga-agwa otu ihe ahụ banyere Basecamp ọzọ.
Anyị na-eji Basecamp ruo ọtụtụ afọ mana n'oge na-adịbeghị anya (ihe dị ka otu afọ gara aga) anyị mejuputara na ụlọ ọrụ anyị ọrụ nyocha ngwa ọrụ ọzọ sitere na comindware. Ọrụ ndị ọzọ, nhọrọ ndị ọzọ na teknụzụ na-agbanwe agbanwe nke ọhụrụ ElasticData. Ọ bụrụ na ịnwalebeghị ya - nwaa.
Ọ ga-amasị m ịnụ ihe ị chere maka basecamp ọhụrụ ahụ. Adịghị m onye ofufe, mana achọpụtara m na UI na-atọ ụtọ. Echiche?
Agbanwebeghị m n'ihi na enwere ụfọdụ mmachi na ntụgharị. Ma, na vidiyo niile ahụrụ m ya, ọ dị ka ụfọdụ ezigbo njiri ike na ahụmịhe nke onye ọrụ emeela nke ga-eme ka ọ dị mma ma dịkwa mfe ịlaghachi azụ n'etiti ọrụ.
Ndewo, New Basecamp dị mma mana ọ ka enweghi ọtụtụ atụmatụ dịka eserese gantt, asụsụ, nkata inbuilt, nyocha oge, ọrụ aga-aga wdg.
Echeghị m na ha ga-agbakwunye obere akara ma na-eme ihe n'eziokwu anaghị m atụ anya. Anyị na-eji ha maka obere ọrụ, yana obere ìgwè na ịtinye eserese Gantt ga-eme ka anyị pụọ n'elu ikpo okwu ha na otu n'ime ndị asọmpi ha.
Dec 18, 2012 na 4:43 PM
Ndị mmadụ na-ewutekarị m na ndị na-asị “cusshọn” kama “ịkọcha.” - ọ dịka otu onye nwe ụlọ blog na-egwu ala ihe ruru unyi iji mepụta ihe.